Kutaura kwakachena kwechinhu chakaoma kunzwisisa.
Château Fonplégade inomiririra kutaura kwakachena uye kwakanyanya kufanana kweedu terroir. Yakagadzirwa ne mosaic yeakakodzera ivhu uye kusiyanisa kunoshamisa kweiyo geology uye geography, munda wedu wemizambiringa wakakamurwa kuva 27 mapasuru pane 45.5 maeka. Aya mabhuruku-akarimwa akavharika anosanganisira pendi yemunyori weiyo terroir yedu, achipa hupfumi hwekunakisa zvikamu zvekusimudzira waini yedu.
Iine chiyero chisingaenzaniswi pakati pemichero, kuomarara uye kunhuhwirira kureba, waini iyi inoratidzwa neyakaipisisa minerality, inowirirana kubva gore kusvika pagore, neakapfava uye anodzvinyirira tannins uye ane velvety mameseji. Iyo yakagadzirwa kubva muminda yemizambiringa yakare, inorimwa-mushe-yakarimwa-kwemaoko ichishandisa maitiro uye biodynamic maitiro kuburitsa hunhu hwakanakisa mune imwe neimwe sumbu. Predominely Merlot, iko kusanganisa kunosanganisira kungokwana kabhoni yeCabernet Franc yekuteedzera waini yacho neyekunaka tannic chimiro.
Château Fonplégade ane makore gumi nematanhatu nemakumi matanhatu emapa 16% mitsva yemoak French, makumi matatu muzana mumapuranga emafuta eFrench anegumi nerimwe uye gumi muzana mumidziyo yekongiri yemazai.
5 kune makore 20
"KuChâteau Fonplégade, tinodada nekuva mumwe wevapiona ve biodynamic viticulture paBordeaux's legendary Right Bank Bank. Isu tinonzwa iri mukana wedu nebasa redu kuve vatariri vakazvipira venzvimbo ino yakakosha kuitira kuti ichengetedzwe kuzvizvarwa zvinotevera" . - Denise Adams, Muridzi
Isu takagashira yedu organic yekurima chitupa muna2013, mushure mekuomesa makore matatu maitiro ekuongorora, uye mhedzisiro yakatikurudzira kutsvaga biodynamic chitupa. Nenhungamiro yemuchengeti wedu anoremekedzwa Corinne Comme, tiri kutora zvimiro zvedu zvekurima padanho repamusoro. Nekudzidzira zvipenyu zvakasiyana pane yedu imba uye kutora nzira yakazara yekurima, tiri kushanda pamwechete kusimudzira mhando yewaini yedu kusvika pakakwirira kwazvo. Kusvika izvi, nzvimbo yedu inopa imba inogamuchira vaenzi kwete chete kumizambiringa, asi kumakwai, huku neuchi nyuchi.